घरमै सम्मान- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
पर्वत — कुश्मा ३ दुर्लुङकी ९३ वर्षीया बाटुली सर्किनीले पाँच पुस्ता देखिन् । बाल्यावस्थादेखि हालसम्मको परिवर्तन देखेकी उनले हर्षका आँसु खसालिन् । कारण बन्यो नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले घरमै पुगेर गरेको सम्मान ।
कुश्मा नगरपालिका– ३ दुर्लुङकी बाटुली सर्किनीको घरमै पुगेर सम्मान गर्दै नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी । तस्बिर: अगन्धर तिवारी
कथित दलित परिचयकै कारण गाउँमा पानीपँधेरो बार्नुपर्ने र उपल्ला जातिको आँगनको बाटोसमेत हिँड्न नपाइने अवस्थाको साक्षी बनेकी उनी मंगलबार स्थानीय सरकारका प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति घरमै पुगेर गरेको सम्मानले भावुक भइन् । ‘मैले छोइछिटो मात्रै होइन, दलितलाई देख्दा साइत बिग्रिन्छ भन्ने समाज पनि भोगें,’ उनले भनिन्, ‘आज मेरै घरमा मलाई सम्मान गर्न सरकारप्रमुख आउनुभएको छ । दलितलाई गर्ने व्यवहार बदलिएकोमा असाध्यै खुसी लागेको छ ।’
आफूभन्दा पनि सन्ततिको स्वतन्त्रताप्रति सन्तुष्ट भएको भाव उनले व्यक्त गरिन् । गाउँमै खेतीपाती र पशुपालनमा ९१ वर्ष बिताएका दुर्लुङकै टीकाराम पाध्या पनि नगरप्रमुख जोशीले घरमै आएर ब्लाङकेट ओढाएर सम्मानपत्र दिँदा औधी खुसी भए । गाउँका अगुवा र नेताहरूले विभिन्न कार्यक्रममा गलाभरि खादा र मालासहित सम्मान थापेको देख्दै आएका उनले आफूले कहिल्यै सम्मान पाएको अनुभव गरेका थिएनन् । शारीरिक अशक्तताले घरमा भित्र– बाहिर गर्न गाह्रो जीवन बिताइरहेका उनलाई सम्मानले भावुक बनाएको थियो ।
कुश्मा नगरपालिकाले नगरभित्रका ९१ जना जेष्ठ नागरिकलाई घरघरै पुगेर सम्मान गर्ने अभियान चलाएपछि नगर प्रमुखसहितका जनप्रतिनिधि पुगेका हुन् । नगरप्रमुख जोशीले जेष्ठ नागरिकका घरघरै पुगेर सम्मान मात्रै गरेनन्, उनीहरूसँग कुराकानी पनि गरे । उनीहरूका गुनासा सुने । ‘भोट हालेर जिताएका नेता गाउँमा देखिँदैनथे,’ ९२ वर्षीया धनपति पाध्याले भने, ‘तपाईं आउँदा हामीलाई भगवान् प्रकट भएजस्तो भएको छ । जति माथि पुगे पनि हामीजस्तालाई नबिर्सनुहोला, आशीर्वाद लाग्छ ।’ वृद्धवृद्धाहरूले बुढेसकालको सहाराका लागि आश्रयस्थल भए धेरै सहज हुने बताए । उमेर मिल्ने दौंतरीहरू एकै ठाउँमा भेला भएर भजनकिर्तन गरेर समय कटाउने सामूहिक भवनको माग गरे ।
नगरप्रमुख जोशीले दुर्लुङबाट सुरु गरेको जेष्ठ नागरिक सम्मान अब सबै वडामा पुग्ने बताए । ‘सम्मान लिनकै लागि बूढाबूढी नगरपालिकासम्म आउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘घरमै पुग्दा उहाँहरूलाई आत्मसम्मान हुन्छ, हामीलाई सन्तुष्टी हुन्छ ।’ नगरप्रमुखको हैसियतमा पाउने मासिक तलवभत्ताबाट विद्यार्थी र जेष्ठ नागरिकको सम्मानमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका जोशी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनस्वरूप घरघरै पुगेका हुन् ।
आफ्नो पारिश्रमिकबाट उनले स्कुले बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोसाक र नगदसमेत सहयोग गर्दैआएका छन् । ‘मेरो कार्यकालभरि पाउने तलवभत्ताबाट वृद्धवृद्धा र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्छु,’ उनले भने, ‘मासिक तलवभत्ताको हिसाब गरेर सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउँछु ।’ आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिका तथा पारिवारिक बहिस्करणमा परेका वृद्धवृद्धालाई विशेष सहयोग गर्ने उनले बताए । समस्यामा परेकाहरूलाई नगरपालिकाबाट पनि सहयोग गरिने उनले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ १०:४२
युवामा सुर्तिजन्य वस्तु प्रयाेग दीगाे विकासकाे चुनौती :विज्ञहरु
भाद्र २९, २०७५ भिषा काफ्ले
बाली (इन्डोनेसिया) — एसियाली राष्ट्रका युवाहरुमा बढ्दै गएको सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको प्रभावले दीगो विकासलाई नै चुनौती दिने अवस्थामा पुगेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
इन्डोनेसियाको बालीमा बिहीबारबाट सुरु भएको सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका सहभागी विज्ञहरुले आगामी पुस्तालाई स्वस्थ्य बनाउन सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट टाढा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरुले स्वस्थ्य युवाको कल्पना नगरी दीगो विकास असम्भव भएको बताए। सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनको कारण युवा अवस्थामा नै दीर्घरोगको शिकार भइ राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने समयमा राज्यलाई नै थप भार बढ्दै गएको उनीहरुको चिन्ता थियो।
सम्मेलनमा बोल्दै इन्डोनेसियाकी स्वास्थ्य मन्त्री निला मोइलोइकीले १५ देखि १९ वर्षका युवाको समूह सुर्तिजन्य पदार्थको लतमा पर्ने गरेको बताइन्। सुर्ति उद्योगले आफ्नो दीर्घकालीन ग्राहकको रुपमा यो उमेरका युवालाई बढी प्रभाव पार्ने उनको धारणा थियो।
यही समूह नै अबको बिश्वलाई अगाडी बढाउने पुस्ता भएकाले सुर्तिजन्य बस्तुको प्रभावबाट टाढा राख्न यस क्षेत्रका राजनैतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्ने बताइन्। ‘हामीले यही कारण परिवारको सदस्य गुमाउनु परिरहेको छ, सन्तान कुलतमा परेको हेरिरहनु परेको छ।’ उनले भनिन्, ‘यी सबै जोगाउने दायित्व हामी राजनीतिक दलहरुको हो। व्यवसायीका दबाव आउँछन् तर त्यसलाई बेवास्ता गरेर जनताको स्वास्थ्य जोगाउनु हाम्रो नैतिक दायित्व हो।’
२९ एसियाली देशका हजार भन्दा बढी सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियानमा लागेका मानिसहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै इन्डोनेसियाका महिला सामाजिक विकास तथा बालबालिका मन्त्री युहाना एम्बिसे ले इन्डोनेसियामा २४ प्रतिशत युवाहरुले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको बताइन्। उनले एसियाली देशहरुमा यही अनुपातमा युवाहरु सुर्तिजन्य पदार्थको कुलतमा लागेको दावी गरिन्।
इन्डोनेसियामा ८३ लाख बढी बालवालीका सुर्ति जन्य पदार्थको सेवनमा रहेको बताइन्। उनले देश विकासको मूलआधार रहेका युवा र अबको केही वर्ष पछि हुनुपर्ने सक्रिय युवा दुइटै पुस्तालाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढेको बताइन्। १९ प्रतिशत महिलाले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको र ती मध्ये ११ प्रतिशत गर्भ तुहिने गरेको इन्डोनेसियाको तथ्यांक रहेको छ।
बिश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधी डा. वरानी तारागंले विश्वले लिएको दीगो विकासलाई पूरा गर्ने हो भने सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण विना सम्भव नभएको बताए। ‘अबको पुस्ता स्वस्थ्य देख्न चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले नसर्ने रोगको प्रमुख कारण रहेको सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा तत्काल लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनको जोड थियो।
सुर्तिजन्य पदार्थ सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय सन्धीलाई पालना गर्दै यस क्षेत्रका देशहरुले तत्काल कार्यन्वयनतर्फ नलागे अबको पुस्ता स्वस्थ्य भेट्न मुस्किल पर्ने द यूनियन एसिया प्यासिफिकका उपनिर्देशक डा. तारासिंह बम बताउछन्। ‘कुरा मात्र हैन सीधै काममा लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने।
बिश्व स्वास्थ्य संगठनकाअनुसार प्रत्येक वर्ष सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। जसमा एक तिहाई जनसंख्या विकासोन्मुख देशबाट प्रभावित हुने गरेको छ। सन् २०१६ मा बिश्वमा ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको युवा पुस्ताको धुमपान मोह यही तरिकाले बढ्दै गए २०३० सम्ममा १६ दशमलव ४ पुग्ने बिश्व स्वास्थ्य संगठनकी दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरु निर्देशक डा. पुनम क्षेत्रपाल बताउँछिन्।
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ १०:३५